इलस्ट्रेटर | क्लिपि mas मास्कको रूपमा पाठ सिर्जना गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
के तपाईं क्लिपिंग मास्कहरू कसरी सिर्जना गर्ने र सम्पादन गर्ने सिक्न चाहनुहुन्छ? अर्को, हामी यसलाई केहि चरणहरूमा वर्णन गर्दछौं।
क्लिपिंग मास्क के हो? una क्लिपिंग मास्क एक भेक्टर मार्ग हो जसले तपाईंलाई एलिमेन्ट (पथ वा छवि) मास्क गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि यस तत्वले मास्कको आकार प्राप्त गर्दछ, जुन बाटोबाट बाहिरको सबै चीज लुकाईरहेको हुन्छ। यो एक धेरै व्यावहारिक उपकरण हो र धेरै चाखलाग्दो परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
क्लिपिंग मास्कहरू सिर्जना गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। एडोब इलस्ट्रेटरको सबै रहस्यहरू जान्न गाह्रो र जटिल कार्य हो। यस साधारण ट्यूटोरियलमा हामी आधारको रूपमा पाठको साथ क्लिपिpping मास्कहरू सिर्जना गर्ने तरिका वर्णन गर्नेछौं।
1 तपाईंले मास्क गर्न चाहानु भएको तत्व छनौट गर्नुहोस्
2 पाठ लेख्नुहोस्
3 मास्क सिर्जना गर्नुहोस्
4 तपाईंको क्लिपिंग मास्कको आनन्द लिनुहोस्
तपाईंले मास्क गर्न चाहानु भएको तत्व छनौट गर्नुहोस्
पहिले, तपाईंले एलिमेन्ट रोज्नु पर्छ जुन तपाईं मास्क गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, एक छवि। यो छवि महान हुनु पर्छ गुणस्तर र मास्क भन्दा उही आकार वा ठूलो हुनुपर्छ। तपाईं छवि बैंकहरूमा क्वालिटी छविहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ Unsplash, pixabay o पिक्चर.
छवि अनस्प्लेशबाट लिइएको हो
त्यसोभए तपाईको पाठ लेख्नुहोस्।
याद गर्नुहोस्, त्यो पाठ छवि माथि हुनुपर्दछ। छवि पछाडि पठाउन, तपाईले छविमा दायाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ र -> पछाडि पठाउनुहोस्।
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले पर्याप्त मोटो रेखाको साथ टाइपफेस प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं ठीक स्ट्रोकको साथ टाइपफेस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, छवि प्रशंसा गरिने छैन। त्यसोभए तपाईंले सुरू गर्नु अघि राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस् कि तपाईं कसरी डिजाईन चाहानुहुन्छ र टाइपफेस फेला पार्नुहोस् जुन यो सुहाउदो छ।
मास्क सिर्जना गर्नुहोस्
एक पटक तपाईंसँग छवि र टेक्स्ट आर्टबोर्डमा भएपछि, सबै बाँकी रहेको क्लिपिंग मास्क सिर्जना गर्नु हो।
यो गर्न, वस्तु चयन गर्नुहोस् -> क्लिपिंग मास्क -> बनाउनुहोस्
याद गर्नुहोस् कि दुबै वस्तुहरू हुनुपर्दछ चयनित। चयन गर्न, पिकर उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको क्लिपिंग मास्कको आनन्द लिनुहोस्
चतुर! तपाईसँग पहिल्यै क्लिपिंग मास्क बनाइएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » इलिस्ट्रेटरको साथ क्लिपि mas मास्कको रूपमा पाठ सिर्जना गर्नुहोस्
म्यूज new० को दशकमा उसको नयाँ एल्बमको नयाँ 'कभर' सँग मर्ज भयो